Bay akwukwo - ọgwụ akuku na contraindications
Mma na ike Piggy bank nke omenala Ezi ntụziaka
Ọ bụghị onye ọ bụla maara na, na mgbakwunye na ekpomeekpo, akwukwo akwukwo nwere ọtụtụ ihe bara uru nke na-ekwe ka a jiri ya mee ihe dị ka osisi ọgwụ.
Njirimara ọgwụgwọ na contraindications nke n'ọnụ mmiri
Akwụkwọ akwukwo laaral nwere nnukwu mmanu nke mmanu di iche iche, nke o nwere uda uto ya, tinyere acids organic (valerian, caproic, acetic), phytoncides (inye antibacterial action), tannins, trace elements (magnesium, manganese, sodium, selenium, phosphorus , zinc).
Ihe ndị bụ isi ọgwụ ọgwụ laurel gụnyere:
mgbochi mkpali na antibacterial;
njikwa (tinyere ngwa mpụga);
agụụ na-akpali akpali;
bara uru maka metabolism na normalizing ya.
Na ndị mmadụ ọgwụ maka ọgwụgwọ nke tumadi na-eji decoctions, infusions na mmanya tinctures nke osisi. Tụkwasị na nke ahụ, nsị nke akwụkwọ ọhụrụ na-enyere aka ịkwụsị ume ọkụ , ma nwee mmetụta dị ịrịba ama na stomatitis na mbufụt nke goms.
Nkọwapụta ọgwụgwọ na akwukwo akwukwo bụ:
mmeghachi omume nke nfụkasị (mmanụ dị oké mkpa nke dị na osisi ahụ nwere ike ịbụ ihe nrịta siri ike);
ime ime (nwere ike iwelie olu nke akpanwa);
ụdị dị ukwuu nke hepatic na renal failure.
Mmetụta nke akwukwo laurel nwekwara ike ịkpasu afọ ntachi - n'ihi na astringent Njirimara nke osisi a.
Iji ọgwụ ọgwụ nke mmiri na-emepụta na-arịa ọrịa shuga
Site na-edozi metabolism nke carbohydrates, akwukwo akwukwo a na-eme ka ha na-ahazi usoro shuga shuga.
Ntụziaka maka normalization nke shuga ọbara
n'ọnụ mmiri epupụta - 10 epupụta;
mmiri - iko 3.
Nkwadebe na ojiji
A na-akwadebe nhazi decoction na ụzọ abụọ. Na nke mbụ, a na-awụnye akwukwo akwukwo na mmiri na-esi na mmiri ma tinye maka awa 4. Ụzọ nke abuo - wunye epupụta na mmiri oyi, weta obụpde, mgbe ahụ, obụpde maka nkeji 5 ma na-esi ọnwụ ruo oge atọ. N'okwu nke abụọ, broth na-eme ka ọ dịkwuo njọ. Were ọgwụ a na-atụ aro ugboro 2-3 n'ụbọchị, tupu nri, 100 (nke ọbara shuga na-erughị 10 mmol / l) ma ọ bụ 200 ml (ya na sugar n'elu 10 mmol / l).
Ekwesiri icheta na ọgwụgwọ a na-adịkarị irè na ọrịa shuga nke ụdị 2, na ụdị insulin na-adabere na ọrịa ahụ enweghị mmetụta dị mma. A nabatara akwukwo broth bay akwukwo, ma oburu na ozo n'agbanyeghi na enwere nsogbu na enwere nsogbu nke imeju na akụrụ, nakwa gosiputa nsogbu ya.
Ọgwụgwọ nkwonkwo na akwukwo akwukwo
Ngwa nke n'ọnụ mmiri na-etinye maka ọgwụgwọ nkwonkwo dabeere, na mbụ, na ọgwụ ndị na-egbu egbu na nje bactericidal, na nke abuo - ike iji decoration na infusions n'ime ahu si nnu.
Ngwurugwu maka nkwonkwo
mmiri - iko atọ;
mmanụ aṅụ - 2 teaspoons.
Doo tinye mmiri ọkụ ma na-esi ọnwụ na thermos maka awa 4, mgbe ahụ, gbanye ma tinye mmanụ aṅụ. Mmiri a na-eme nke ọma na-aṅụ mmanya na 4-5 mmeri n'ụbọchị. Were infusion maka ụbọchị 3, wee mee ezumike, mgbe izu abụọ gasị gasịrị, a na-emegharị usoro ahụ. Nkwado nke laurel a na-eme ka akwukwo dị ukwuu na-eme ka ọbara na-agba ọbara.
Uro n'ihi nkwonkwo
n'ọnụ mmiri doo - 10 g;
bọta - 100 g.
A na-agbazi akwukwo akwukwo, tinye ya na iko otu iko na mmanu na okara nkeji n'ime mmiri. A na-echekwa ude mmanụ dị ọcha n'ime friji. N'ọnọdụ ụfọdụ, iji mmanụ dị otú ahụ mee ihe nwere ike ịkpasu anụ ahụ iwe .
Parodontosis - ọgwụgwọ na ọgwụ ndi mmadu
Marva Ohanyan - na-ehicha ahụ
Mumiye - uru bara uru na contraindications
Mmiri ara ehi - esi esi elekọta ma jiri?
Pasili - ọgwụ Njirimara na contraindications
Portulak ubi - ọgwụ Njirimara
Ezigbo mmanụ aṅụ
Kedu uru nke tii tii?
Oké osimiri-buckthorn - ngwa
Stevia - contraindications
Lubistok - bara uru ihe onwunwe na contraindications
Oke akwukwo ndu - ngwa
Ụlọ nke Wojew
Ntughari - ịdakwasi ma na-elekọta na ala oghe
Kedu ihe kwa ọnwa maka ụmụ agbọghọ?
Akwụkwọ ndị ọ bụla na-eto eto kwesịrị ịgụ
Cameron Diaz na Benji Madden zoro ezo site na mmiri ozuzo na ụlọ ahịa ihe oriri
Isi iyi Trevi na Rom
Duputa mgbidi na kichin
Kedu ihe nzuzo nke nkwekọrịta nke Bella Hadid?
Osisi diuretic maka ubu ibu
Ezi apple apple na ude mmiri
Ugbo ala na ime ụlọ ịwụ ahụ
Nwere ike ịhịa aka n'ahụ
Nurofen - analogues
Mkpụrụ cystitis interstitial
Ngwunye na muta
3 izu nke afọ ime - mmetụta
Nri maka nwamba nwamba